အိမ်မက်လွင်ပြင် - Dreamz valley: October 2014
ကရင့်အရေး သူ့ အရေး
လူထုအရေး သူ့ အရေး
တိုင်းပြည်အရေး သူ့ အရေးလို့ အမြဲသတ်မှတ်
နေ့ မအား ညမအား
ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် နော်အုန်းလှအား ဤကဗျာဖြင့် ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်
(အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄)
Posted by Sawlu at 11:18 PM No comments:
Posted by Sawlu at 12:07 AM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး ... ဈေးကြီးသလား ...
ကုန်ကျစရိတ် အလွန်များတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအသုံးစရိတ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွေကို နိုင်ငံတကာ...ကနေ မျက်နှာအငယ်ခံရယူ ဆောင်ရွက်နေ ပေမယ့် အလှူငွေကို အပြည့်အ၀မရကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်
စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှသာ အလှူရှင်တွေက အလှူငွေအပြည့် အ၀ ထည့်ဝင်မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်ထောင်
စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ လွှတ်တော်အမတ်တွေကို အသိပေး လိုက်ပါတယ်။
Posted by Sawlu at 10:15 PM No comments:
Posted by Sawlu at 11:26 PM No comments:
ဒါလားဟဲ့ ကရင်တွေ - ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ..
ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော် DKBA က ကလိုထူးဘော တပ်ဖွဲ့ ဗျူဟာမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူး ကြီး စောဆန်းအောင်ကို ၂၁. ၁၀. ၂၀၁၄ နေ့စွဲနဲ့ တာဝန်မှရပ်စဲကြောင်းနဲ့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း DKBA က စာထုတ်ပြန်ပြီး ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အမိန့်ထုတ်ပြန်စာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသူကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောလားပွယ်ကိုယ်စား ဗိုလ်ချုပ်မိုရှေးဖြစ်ပါတယ်။
ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အစိုးရ တပ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေမှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူး ကြီး စောဆန်းအောင်က အဓိက တာဝန်ရှိတဲ့အပြင် ဌာနချုပ်ကိုလာရောက်ဖြေရှင်းဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ အတွက် တာဝန်ကရပ်စဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ဒီကေဘီအေအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးထွန်းထွန်းက ပြော ပါတယ်။
"ပြီးခဲ့တဲ့လ ၂၆ ရက်နေ့ ကျိုက်မရော မြို့နယ်ထဲ မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အဓိကတာဝန်ပေးတာက ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စော ဆန်းအောင်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်၊ အဲ့ဒါလာရောက်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဖုန်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ပေမဲ့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူကိုဒီတာဝန်တွေကို ရုပ်သိမ်းပြီးတော့ အဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပယ်တာဖြစ် ပါတယ်"
အစိုးရနဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်တွေအကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေချိန်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြန် လည်ဖြစ်ပွားစေပြီး ငြိမ်ချမ်းရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေနိုင်တဲ့အတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး တာဝန်ယူဖြေရှင်းဖို့ တာဝန်ရှိတာကြောင့် အခုလို ထုတ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ကစပြီး မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ်မှာ အစိုးရတပ်နဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့အကြား ပစ်ခတ်မှုတွေ ၃ ရက်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
တိုက်ဆိုင်မှုတခုကတော့ ၄င်းအမိန့်စာထုတ်ပြန်သောရက်သည် ဖူးတာသီး ခေါ် စောတူးတူးလေး အပါအ၀င် ကေအဲန်ုယူခေါင်းဆောင်များဒီကေဘီအေခေါင်းဆောင်များနှင့်သွားရောက်တွေ့ဆုံသောနေ့ရက်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Sawlu at 9:35 PM No comments:
The International Karen Organization, consisted of Karen communities living in the Asia-Pacific region, Europe, and North America, was formed on September 20th, 2014. The IKO will work directly with Karen communities and organizations inside Burma, as well as on the Thai-Burma border, in order to inform and educate international community about the conditions regarding peace and conflict, human rights, and sustainable development in Karen State. Likewise, the IKO will work with other communities and organizations from other ethnic nationalities to achieve the establishment ofagenuine democratic federal union of Burma based upon the principles of equality, justice, and self-determination.
The IKO will work with Karen communities in more than 30 countries to uphold the Karen values and aspirations as well as maintain and promote the Karen culture, literature, language, and traditions. Finally the IKO will work closely with Karen National Union,agenuine representative organization of the Karen people to achievealasting peace and political settlement after 65 years of civil war in Burma while upholding the principles of Saw Ba U Gyi.
The first International Karen Organization Executive Committee by Founding group.
Asia & Pecific Region: Saw A Ganemy Kunu, Mahn Orlando, San Lwin, Ester Kyaw, Ni Ni, Saw Lwin Oo, Aggga Poe Chit
European Region: Zaw Naw, Margret Hla Htoo, Choo Day Charles, Myint Aung, Hsa La K’ Paw, Eh Htee Kaw, Htoo Ku Hsa Say
North America Region: Slone Phan, Harold Cribb, Raymond Tint, Mahn Thaung Tin, Myra Dahgaypaw
President: Saw A Ganemy Kunu
Vice Presidents: Mahn Thaung Tin and Zaw Naw
General Secretary: Naw Myra Dahgaypaw
Joint Secretaries: Agga Poechit,Saw Eh Htee Kaw
Spokespersons: Mahn Orlando (Burmese and Karen language)
Naw Htoo Ku Hsa Say and Naw Myra Dahgaypaw (Karen and English language)
Information and Media Sub-Committee Chairman: Harold Cribb
Sub-Committee Members: Htoo Ku Hsa Say, Slone Phan, Kabaw and Agga Poechit
"IKO Welcome all Karen around the world to support Karen Self-determination struggle and Federalism by any way all level that you can join "
Posted by Sawlu at 8:32 PM No comments:
KNU ကို လုပ်ကြံရန် ကြံစည်မှုကြီး
Posted by Sawlu at 10:21 PM No comments: